अपडेटः अस्पताल ल्याउन तिन घण्टा अघिनै केहि भैसकेको थियो,आखिर के भएको थियो ? : प्रकाशको मृत्यु बारे पुष्टि गर्दै बोल्यो अस्पताल !(भिडियो सहित) « Npnews
प्रकाशित मिति: November 19, 2017
काठमाण्डौ,०३ मङ्सिर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र एवं माओवादी केन्द्रका युवा नेता प्रकाश दाहालको निधन भएको छ । निजी विनास लाजिम्पाटमा सुतिरहेकै अवस्थामा उहाँको निधन भएको खुल्न आएको छ ।
लाजिम्पाटस्थित निवासमा सुतेकै ठाँउमा अचेत अवस्थामा भेटिएपछि प्रकाशलाई आइतबार बिहान काठमाडौंको थापाथलीमा रहेको नर्भिक अस्पतालमा पु¥याइएको थियो । उहाँलाई हृदयघात भएको हुनसक्ने आशंका गरिए पनि अस्पतालले आधिकारिक रुपमा केही बताएको छैन । तीन दिनदेखि अस्वस्थ रहदै आउनु भएका प्रकाश दाहाल बुबा पुष्पकमल झापा जानु भएपनि उहाँ भने चितवनबाट काठमाडौं फर्किनुभएको थियो ।
पत्नी विना निर्वाचनाको व्यस्तताका कारण कञ्चनपुर तिर नै रहेको अवस्थामा लाजिम्पाट निवासमा उहाँ आमा र भाञ्जीहरुसंग रहदै आउनु भएको थियो । तर, आइतबार बिहान चाँडो नउठेपछि आमा सीता दाहाल कोठामा गएर उठाउन खोज्दा अचेत अवस्थामा देखेपछि तत्काल नर्भिक अस्पताल पठाइएको थियो । सुतेकै ठाउँमा प्रकाशको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भए पनि अस्पतालले उनको मृत्युको कारणबारे औपचारिक रुपमा घोषणा गरीसकेको छ |
यो पनि पढ्नुहोस्-अपडेटः प्रचण्ड नर्भिक अस्पताल पुग्दा जे देखियो- थामिएनन् आखामा आशु(भिडियो सहित)
काठमाडौं,३ मङ्सिर । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पुत्र प्रकाश दाहालको हृदयघातका कारण निधन भएको छ।
दाहाललाई अचानक राति हृदयघात भएपछि बिहान ५ बजे अचेत अवस्थामा नर्भिक अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। बिहान साढे ५ बजे अस्पताल पुर्‍याउँदा उनको मुटु बन्द भइसकेको नर्भिक स्रोतले जानकारी दियो।
‘५:३० मा अस्पताल पुर्‍याउँदा मुटु बन्द भएको ४-५ घन्टा भइसकेको थियो। यसको कारण हृदयघात वा अन्यकारण पनि हुनसक्छ, संलग्न डाक्टरले भने।
छोराको यस्तो खबरले शनिबार बिर्तामोड चुनावी सभा सम्बोधन गर्न पुगेका प्रचण्ड हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ फर्के लगत्तै नर्भिक अस्पताल पुगेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्-प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालको निधन , यस्तो रोग लागेको खुलासा (भिडियो सहित )
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालको निधन भएको छ । गम्भीर बिरामी परेपछि काठमाडौंस्थित नर्भिक अस्पतालमा अचेत अवस्थामा पुर्‍याइएका प्रकाशको निधन भएको एक चिकित्सकले जानकारी दिए ।पुष्पकमल दाहाल लगायत काठमाडौं आइपुगेपछि केही समयपछि घोषणा गर्ने ती चिकित्सकले बताए । चुनावी अभियानमा झापामा रहेका पुष्पकमल दाहाल, प्रकाशकी दिदी रेणु दाहाल काठमाडौं आउँदै छन् ।कस्तो रोग लागेको रहेछ त प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहाललाइ ? भिडियोमा हेर्नुहोला ।